Wararka - Ma ogtahay horumarka mobilada? Runtii nolosheenna way beddeshay
Ma ogtahay horumarka mobilada? Runtii nolosheenna way beddeshay
Marka laga hadlayo sheygan, dadka qaarkiis waa inay arkeen. Xaqiiqdii, si adag markaan u hadlo, sheygan lama wici karo taleefanka gacanta. Qalabkani wuxuu markiisii ​​ugu horreysay soo muuqday qarnigii 20-aad, markii Shanghai ay ahayd magaaladii ugu horreysay ee furta saldhigyada shaashadda. Intaas ka dib, qalabka BP wuxuu si rasmi ah u galay suuqa Shiinaha. Shaqada aaladdan, qaar ka mid ah jiilkii 80-kii kadib ee adeegsaday ayaa ogaan kara in markaad rabto asxaabtaada ama macaamiishaadu inay kula soo xiriiraan, waa inaad u sheegtaa lambarkaaga sawirka ka hor. Kadib markay u baahdaan inay kula soo xiriiraan, waxay heli doonaan xarun fariin oo ay ku wargeliyaan bartaan lambarkaaga. Ugu dambayntii, madal ayaa ku wargalin doonta, markaa waad heleysaa Hel farriinta loo yeedhay si aad u hesho agab taleefan oo u dhow si aad dib ugu soo wacdid. Markaan fiirino howshan, waxaan ogaan karnaa in wada xiriirka xilligaa uusan aheyn mid aad ufudud ah, mana gaari karin howlo waqtigiisa kufilan.
Taleefanka gacanta Era
Markaan ka hadlayno qaabkan taleefanka gacanta, wax yar buu uga dhow yahay nolosheenna casriga ah. Sheygan waxaa soo saaray shirkadda Motorola sanadkii 1973. Muuqaalka taleefannada gacantu waxay ka dhigan tahay in dadku runtii leeyihiin taleefannada gacanta. Badeecadan, waxaa kujira shaashad LCD ah iyo badhamooyin kala duwan. Aragtidayada, waxaa laga yaabaa in sheygan kaliya uu wici karo taleefan. Xaqiiqdii, waxay leedahay shaqooyin badan, sida ciyaar ciyaar, duubitaan iyo MP3.
Mashiinkan ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday dalal shisheeye, iyada oo isweydaarsiga adduunka, dalkeenu sidoo kale bilaabay inuu soo saaro badeecadan Sanadkii 1987, Guangdong ayaa hoggaanka u qabtay dhameystirka xiriirka isgaarsiinta. Ka dib muuqaalka sheygan ee dhulweynaha, wuxuu caan ku ahaa dadka. Si kastaba ha noqotee, qiimaha sarreeya ee waqtigaas, dadku waxay u maleeyeen in haddii qofna haysto mashiin noocaas ah, uu noqon doono daalim maxalli ah aragtideena hadda. Goor dambe, iyada oo waqtiga la marayo, waxaa soo ifbaxay alaabooyin cusub. Sannadkii 2001, ayaa taleefanka gacanta laga tirtiray xilliyadii, taas oo runtii noqotay erey taariikhi ah.
Imaatinka taleefanka gacanta 2G Era
Iyadoo horumarka joogtada ah ee tikniyoolajiyadda, alaabada cusub ee taleefanka gacanta ayaa nolosheena ka muuqday. In kasta oo taleefanka gacanta ee hore uu muhiimad weyn u leeyahay taleefannada gacanta, haddana muggiisu aad buu u ballaaran yahay mana ku habboon tahay in la qaado. Sidaa darteed, dadku waxay soo saareen taleefannada gacanta ee yar yar iyo kuwa fudud. Intaa waxaa dheer, dhanka teknolojiyadda isgaarsiinta, dadku waxay abuureen teknoolojiyad 2G ah. Telefoonka gacanta ee noocan ah ee ku xirmi kara shabakada 2G wuxuu ku dari karaa shaqooyin aan horey u jirin iyadoo la adeegsanayo shabakadan, sida in e-mailka iyo softiweerka loo diri karo dadka kale. Noocan ah taleefanka gacanta, waxaa sidoo kale jira noocyo caan ah, sida Nokia, oo na siisa aragti qoto dheer. Gaar ahaan caan bay ahayd xilligaas, maxaa yeelay tayada taleefankiisa gacanta ayaa fiicnaa oo xitaa haddii uu dhulka ku dhaco, weli wuu sii jiri karaa.
Aynu ka hadalno qaabka muuqaalka taleefanka gacanta ee noocan ah. Dhanka muuqaalka, waxaa jira noocyo badan oo nashqado ah. Tusaale ahaan, waxaa jira kuwo lagu riixo, sidoo kale waxaa jira noocyo badan oo iyaga ka mid ah, sida flip-flop, flip-flop, iyo hadda qaababka shaashadda ee baaxadda weyn leh, kuwaas oo kala duwan oo ay dadku ka doortaan.
Xigmad iyo xoog baa yimaada
Horumarka joogtada ah ee tikniyoolajiyadeena, kahor intaan dadku abuurin shabakad 2G mar dambe ma dabooli karto shuruudaha dadka,. Sidaa darteed, shabakadaha isgaarsiinta ee 3G iyo 4G ayaa soo baxay. Markii ay soo if baxeen shabakadahaas, dadku waxay qaabeeyeen taleefannada gacanta oo leh shaqooyin u dhigma. Taasi waa waxa aan hadda isticmaaleyno. Noocan ah taleefanka gacanta ayaa leh codsiyo badan, sida dhageysiga heesaha iyo daawashada fiidiyowyada.